पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ नै हुन्छ – Janaubhar
पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ नै हुन्छ
प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन ११, २०७४ | 5210 Views ||
वर्षमान पुन ‘अनन्त’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कार्यालय सदस्य तथा ५ नं. प्रदेश इन्चार्ज
नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ । बैठकले निर्वाचनको समीक्षासँगै पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेको माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य तथा ५ नं. प्रदेश इन्चार्ज वर्षमान पुन ‘अनन्त’ बताउँछन् । पार्टीको पछिल्लो बैठक र समग्र मुलुकको राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर माओवादी नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’सँग नौलो जनउभारका सह–सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी । –सम्पादक
माओवादी केन्द्र सचिवालयको विस्तारित बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकको मूल निष्कर्ष के हो ?
हामीले यसपटकको बैठकमा गम्भीर भएर समीक्षा गरेका छौं । हामीले एजेण्डाको आधारमा विजय हासिल गरे पनि आन्तरिक रुपमा कमजोर संगठनका कारण निर्वाचनमा अपेक्षाकृत रुपमा परिणाम हासिल गर्न सकेनौं ।
राजनीतिक एजेण्डा हाम्रो तर, त्यहीँ एजेण्डाको भरमा अरुले जित्ने राम्रो भएन । अब निर्वाचन भइसकेको छ । माओवादी जनतासँग समृद्धिका लागि जानुपर्छ । अर्को कुरा निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यसको अन्त्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित गर्ने निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
अहिले माओवादीको कमिटी निकै ठूलो र भद्रगोल छ । हामीले ९९ सदस्यीय केन्द्रिय समिति बनाउने निर्णय गरेका छौं । त्यसैगरी माओवादी भनेको माओवादी केन्द्र नै हो । यसको विकल्प हुन सक्दैन भनेर वैद्य, विप्लव लगायतका साथीहरुसँग एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी माओवादीको विकल्प कांग्रेस, एमालेजस्ता वुर्जुवा पार्टीहरु हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउने छौं ।
कमिटीको संख्या घटाउने कुरा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?
हामी अब प्रदेशमा जाँदै छौं । प्रदेशका प्रशिक्षण तथा भेलापश्चात् निर्णय लागु हुन्छ ।
कमिटीमा को पर्ने भनेर तँछाडमछाड पर्ने त होइन ?
यसका लागि हामीले वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्ने छौं । कमिटीमा तीन पुस्ताका नेताहरु रहनेछन् । पुराना, मध्यम र युवा पुस्ता । यसमा खासै समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । हामी सबैले निर्मम भएर समीक्षा गरेका छौं । पार्टीले वैज्ञानिक विधि निर्माण गरेपछि कसैलाई समस्या पर्दैन ।
मुलुकमा माओवादीको संघर्ष र हजारौंको बलिदानीले परिवर्तन सम्भव भयो । तर, निर्वाचन परिणाम हेर्दा माओवादीले अपेक्षाकृत रुपमा परिणाम लिन सकेन नि ?
निर्वाचनमा हार–जीत स्वभाविक प्रक्रिया हो । हामी (माओवादी)ले एजेण्डाको आधारमा जितेका छौं । जनतालाई बुझाउँदै पनि गएका छौं । अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन नजिकिएको छ । मुलुकमा जसको नीति उसको नेतृत्व हुन आवश्यक छ । कुनै बच्चाको सबैभन्दा माया उसको जन्म दिने आमालाई हुन्छ । अरुले त माया गरेको अभिनय गर्ने मात्र हो । देशमा आएका परिवर्तनहरु गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपक्षता, समावेशी समानुपातिक तथा उत्पीडित वर्गको अधिकार माओवादीले जन्माएको हो । यी एजेण्डा कार्यान्वयन पनि माओवादीले मात्र गर्न सक्छ ।
संघीयताको जन्मदाता माओवादी हो । स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गराउने मुल शक्ति नै माओवादी हो । माओवादीले नेतृत्व लिन सक्यो भने मात्रै ती कुराहरुको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ । यस कारणले सबैले माओवादीलाई आफ्ना ठान्नुपर्छ । हामीले पछाडि पारिएका दलित, जनजाति र अन्य उत्पीडित वर्गलाई देशको मुलधारमा ल्यायौं । उनीहरुलाई थप सशक्त पार्नका लागि माओवादी फेरि विजयी हुन जरुरी छ ।
माओवादीले मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी र उत्पीडितका अधिकारहरु ल्यायो तर, यी सबै परिवर्तनहरु हाम्रा कारणले आएको हो भनेर आम जनतालाई बुझाउन सकेको छैन । निर्वाचनको क्रममा तपाईहरु परिवर्तनको स्वामित्व हाम्रो भनेर जनतालाई बुझाउन सक्नुभएको कि भएन ?
मुलुकमा महान जनयुद्ध भयो । जनयुद्धकै जगबाट जनआन्दोलन हुँदै मुलुक संविधानसभामा प्रवेश ग¥यो । विगतमा राजा महाराजाहरुको निगाहबाट मुलुकमा जनताको मुल कानुन संविधान बन्ने गर्दथ्यो । तर, माओवादीकै कारण जनताका छोराछोरीहरु जनप्रतिनिधि भएर पहिलोपटक आफ्नो कानुन आफै बनाउने अवसर प्राप्त गरे । कांग्रेस एमालेहरु नक्कली गणतन्त्रवादी हुन् । उनीहरुलाई संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता केही चाहिएको थिएन । उनीहरुलाई माओवादीले लतार्दै परिवर्तनको एजेण्डामा सहमत गराएको हो । अब कांग्रेस एमालेका स्थानीय तहमा विजयी साथीहरुले गर्वका साथ माओवादीका कारण हामीले यस्तो अवसर पाएका हौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।
माओवादी प्रचारमा भन्दा काममा विश्वास गर्ने पार्टी हो । हामीले परिवर्तन त धेरै गरेका छौं । तर, परिवर्तन हाम्रो कारणले भएको भनेर जनतालाई प्रष्ट पार्न सकेका छैनौं । हामी अब हुने प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा जनतालाई प्रष्ट पार्ने छौं ।
यी एजेण्डाको जन्मदाता माओवादी भएकाले सबैभन्दा बढी माया पनि माओवादीलाई लाग्छ । यी एजेण्डालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा सहभागितामूलक तीव्र आर्थिक विकासका लागि अब नेतृत्वमा माओवादी नै आउन जरुरी छ । कांग्रेस एमालेहरुले यी एजेण्डालाई माया गर्ने छैनन् भनेर आम जनसमुदायले बुझेका छन् । अब महिला, दलित, जनजाति, मधेशी तथा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई नेतृत्व तहमा पु¥याउने माओवादी नै हो । हामीले जसका लागि लड्यौं ती समुदाय र वर्गका माझमा अहिले कांग्रेस एमालेले भ्रम छरिरहेका छन् । उनीहरुको भ्रमको खेतीलाई सबैले चिर्नुपर्छ । माओवादी बिना यो देशमा परिवर्तन कुनै पनि हालतमा सम्भव थिएन भन्ने कुरा आम जनताले बुझिसकेका छन् । अब माओवादीबिना मुलुकले सही गति प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा जनताले बुझ्नेछन् ।
अब आउने प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा आम जनसमुदायले माओवादीलाई अवश्य सहयोग गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अहिले जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् । अब कसैले पनि भ्रमको खेती नगरे हुन्छ । केही वर्ष पहिलेसम्म पैसाको बलमा चुनाव जित्ने परिपाटी पनि थियो । अब जनता पैसामा बिक्नेवाला छैनन् । दल तथा नेताहरुको असली रुपको बारेमा जनतालाई राम्रोसँग थाहा भइसकेको छ ।
तपाई पाँच नम्बर प्रदेशको इञ्चार्ज पनि हुनुहुन्छ । पाँच नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित राजधानीको रुपमा दाङलाई लिइन्छ । यसमा माओवादीको ठोस धारणा के हो ?
भौगोलिक रुपमा दाङ यो प्रदेशको केन्द्र भागमा छ । यहाँको पूर्वाधार अवस्थाका कारणले गर्दा पनि दाङ यो प्रदेशको राजधानी बन्न उपर्युक्त छ । हामीले विगतदेखि दाङलाई नै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । हाम्रो पार्टी सरकारमा रहँदा उच्च अदालत राख्ने निर्णय ग¥यौं । हामी स्पष्ट रुपमा दाङलाई यो प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ भनेका छौं ।
एमालेका साथीहरुले जहाँ गयो त्यहीँ राजधानी हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । हामीले त्यस्तो बेइमानी गर्दैनौं । कांग्रेसका साथीहरु पनि जुन ठाउँ गयो त्यहीँ राजधानी हुन्छ भन्नुभएको छ । हामी त्यो अवसरवादी तरिकाले बोल्दैनौं ।
हामीले बुटवल र नेपालगञ्जमा औद्योगिक राजधानी बनाउन सक्छौं । तर, प्रशासनिक र राजनीतिक राजधानी दाङ बनाउनुपर्छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा हावापानीको दृष्टिले पनि दाङ उपर्युक्त छ । त्यसैगरी दाङमा प्रशस्त खाली जमीन भएकाले सरकारलाई थप व्ययभार पर्दैन ।
तपाईहरु सरकारमा पनि हुनुहन्छ । सरकारले यस विषयमा केही सोचेको छैन ?
सरकारले प्रदेशको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्छ । हामी अहिले सत्तारुढ दलहरुबीच छलफलमा लागेका छौं । सबै कारणले दाङ उपर्युक्त भएकाले दाङ राजधानी बन्ने कुरा निश्चित हो । यसको विकल्प हुन सक्दैन । हामी कसैले पनि राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि समग्र यो प्रदेशको हितमा लाग्नुपर्छ । यसमा मैले पहल गर्छु ।
Prevसाहित्यकार गणेश शाहको निधन
Nextस्थानीय तहमा पुगेनन् कर्मचारी